साह्रै भाग्मानी हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, पार्टनका लागि मानिन्छन् लक्की चाम - Mitho Khabar
April 22, 2022 mithokhabarLeaveaComment on साह्रै भाग्मानी हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, पार्टनका लागि मानिन्छन् लक्की चाम
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार, राशि व्यक्तिको जन्म हुने बित्तिकै जोडिने कुरा हो। वैदिक ज्योतिषका अनुसार मानिसका बारे धेरै जानकारीहरू उनको राशिबाट प्राप्त हुन्छ। राशि चिन्हबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व, सीपहरू र भविष्यमा उसलाई हुने सबै प्रकारका घटनाहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुरा थाहा पाउन सकिन्छ।
ज्योतिषशास्त्रमा जम्मा १२ राशि चिन्हहरू छन् र ती १२ राशिक चिन्हहरूमा सबै मानिस आउँछन्। १२ राशिमा केहि राशिका मानिसको फरक फरक गुणहरू हुन्छन्। सबै १२ राशि मध्ये केहि राशिहरू छन् जसमा माता लक्ष्मीको कृपा सँधै रहिरहन्छ। यी भाग्यशाली राशिले सधैँ माता लक्ष्मीको आशिष पाउँछन्। जसको कारणले गर्दा यी राशीका जातकको जीवनमा खुशी, महिमा र समृद्धिको कमी कहिल्यै हुँदैन।
वृष राशि: यस राशिको स्वामी शुक्र ग्रह हो। स्वामी ग्रह शुक्र भएको कारण, यी राशिका मूल निवासीहरूमा सँधै समृद्धि र महिमा रहन्छ।वैदिक ज्योतिषमा, शुक्र ग्रहलाई खुशी, धन, वैभव र ऐश्वर्यको कारक मानिन्छ। वृष राशिका मानिसमा सधैँ भाग्यको साथ हुन्छ। कुनै पनि कार्यमा थोरै प्रयास गरेर पनि सबै प्रकारका कार्यहरू पूर्ण हुन्छन्। यस राशिका व्यक्तिहरूले कहिल्यै धनको अभाव महसुस गर्दैनन्।
कर्कट राशि: कर्कट राशिका व्यक्तिले धनी बन्ने र आरामले जीवन जिउने मौका पाउँछन्। यस राशिका मानिसले भाग्यको साथ सधैँ पाउँछन्। यिनीहरू धेरै मेहनती र दृढ व्यक्ति हुन्छन्। जे कुरा आफ्नो मनमा ठान्छन् त्यो कुरा निश्चित रूपमा पूरा गर्छन्। अरु व्यक्तिहरूको मद्दत पनि भरपूर प्राप्त गर्छन्। यस राशिका जातकहरूमा माता लक्ष्मीको आशिर्वाद रहिरहन्छ।
सिंह राशि: सिंह राशिको व्यक्ति धेरै मेहनती र कुशल हुन्छन्। यिनीहरू आफ्नो विलासी आवश्यकताहरू पूरा गर्न कडा मेहनत गर्छन्। यस राशिका मूल निवासीहरूमा नेतृत्व गर्ने धेरै क्षमता हुन्छ। उनीहरू गाह्रो कामहरू गर्न त्रसित हुँदैनन्। यस कारणले गर्दा यिनीहरूले धेरै सफलता प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। माता लक्ष्मीको आशिर्वाद यिनीहरूमा रहिरहन्छ। यस राशिका मानिसहरु धेरै धार्मिक प्रकृतिमा हुन्छन्।
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशिका व्यक्ति पनि निकै भाग्यशाली हुन्छन्। यस राशिका मूल निवासीहरूमा धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने इच्छा हुन्छ। यी व्यक्ति धेरै परिश्रमी हुन्छन्। यिनीहरूले कहिले पनि आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्नु पर्दैन। यिनीहरू हरेक समस्याको समाधान फेला पार्न सक्षम हुन्छन्।
The post साह्रै भाग्मानी हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, पार्टनका लागि मानिन्छन् लक्की चाम appeared first on Daily khabar pati.
भरतपुरकी मेयर रेनु दाहालले दिईन राजीनामा
ब्यारेकमा गो”लि लागि मृ”त्यु भएकी कोपिला को घरमा पुग्दा देखियो मनै रुवाउने दृश्य…….(भिडियो)